Ikpebi Igwe Igwe Igwe Na - edozi Isi - OMG Solutions
Ikpebi Correct Ahụ-Ekiri Ekiri
Igwe onyonyo nke na-eyi n’iru bu igwefoto puru iche a na-etinye na ahu mmadu. Igwefoto ndị a na-enye onye ọrụ ahụ nkwado na nkwado site na ịdekọ ihe niile ha nwere. Igwefoto ndị uwe na-eyi agba agba bụ nke ewu ewu n'afọ ndị na-abịanụ ma amalitela iji ya ugboro ugboro. Ugbu a ụbọchị, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị uwe ojii na-eji kamera eyi. Anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị igwefoto eyi na-eyi n’ahịa dị mfe. Ndị uwe ojii na-ejikarị kamera nwere ahụ mmadụ mana ha ejikwala n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ka anyị leba anya n'ụfọdụ ojiji kamera ndị a.
Ojiji nke eserese ahụ eyi.
N'ozuzu, ndị uwe ojii na-eji kamera eyi. Ọ na-enye ha nkwado na nkwado ma na-enyere aka na nyocha ha na nlele. Ma ewezuga nke a, igwefoto ahụ nwere eyi nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Dịka nlere anya, enwere ike iji ha dee nkuzi. Dịka anyị siri mata, a na-ejikọ kamera nwere uwe n'ahụ ahụ ya mere ha na-egosi ihe niile onye ọrụ ahụ na-enweta. N'ụzọ dị otu a, enwere ike iji igwefoto ndị a dekọọ nkuzi na klaasị maka rookies. Anyị nwere ike iwere ihe atụ nke ọkpọ ọkpọ. O nwere ike iji igwefoto ahụ jiri eyi na-enye ihe egwuregwu tozuru oke nke egwuregwu. Nke a na-eme ka ọ dịrị ndị ọzọ mfe ịmụta. Ọzọkwa, anyị nwekwara ike iji igwefoto ndị a n'oge mgbasa ozi na-ebi ndụ maka mkpuchi.
Ihe kpatara gụnyere ihe eji eme ya bụ ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ anyị na ọ bụghị naanị ndị uwe ojii na-ahụ maka uwe ojii na-eji kamera eyi. Ọ nwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ. Nke a na-enye anyị ọtụtụ ụdị igwefoto ndị a n'ahịa nke na-eme ka o siere anyị ike ịhọrọ. Yabụ, anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ igwefoto nwere eyi kachasị mma maka onwe gị.
Otu esi ahọrọ igwefoto ndị nwere ahụsị kachasị mma:
Onwere ihe ndi n’eme ka anyi mata anyi n’achoro igwefoto eyi anyi kwesiri ime. Na mbu, onye ọrụ agha gha ima ihe o ji zuta igwe eji eyi. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na ngalaba ndị uwe ojii, mgbe ahụ ọ ga-achọ ụdị igwefoto ndị ahụ. Ọ bụrụ na ọchọrọ ya maka ịdekọ nkuzi, ọ ga-agarịrị ụdị igwefoto ọzọ. Ngwongwo niile nke igwefoto na –abia na ebumnuche eji ahọrọ igwefoto. Nke a na ntukwasi obi nke igwefoto. Igwefoto ahụ na-eyi ga-adịgide adịgide ọfụma. N’ebe ụfọdụ, igwefoto dara n’ala ma ọ bụ nweta ihe ọzọ. Nke a agaghị emebi akụkụ igwefoto. Mgbe nke a gasị, oge batrị ga-adị mma. Ogo ndekọ a ga-enwerịrị nke ukwuu. Ọ bụ isi ihe a ga-elebara anya. Ọ bụ ihe na-enweghị ike ileghara anya n'ọnọdụ ọ bụla. Yabụ, nsonaazụ igwefoto ga-adị mma. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agharịrịrịrịrị n'uche. Ka anyị nye nkọwapụta nke ihe ndị a.
Ebumnuche nke ịzụta igwefoto:
Ihe mbụ dị mkpa mmadụ ga-eche tupu ya họrọ igwefoto eyi ahụ dị mma bụ ebumnuche nke a ga-eji zụta igwefoto. Ebumnuche bụ maka nke eji eji eserese igwe eyi na uwe ojii. Ọtụtụ n'ime ndị uwe ojii ahụ nwere igwefoto ndị mmadụ yi n'ahụ. Igwefoto ndị a dị iche na igwefoto ndị ọzọ n'ahịa. Dika ejiri igwefoto ndi a maka ihe nlere anya, aghaghi iburu ha n’uche ebum n’uche a. A na-eme igwefoto pụrụ iche na ebe mbụ na-eburu nke ahụ n'uche. Igwefoto ndị a nwere ike inye anyị ihu dị mma, njirimara biometric yana yana ezigbo ndekọ ndekọ nke igwefoto ndị ọzọ enweghị. Nke ahụ na-agwa anyị mkpa nzube dị na ịhọrọ igwefoto eyi.
Ime ndepụta nke atụmatụ:
Nke a bụ ihe ọzọ dị mkpa ị ga-emerịrị tupu ịhọrọ igwefoto kacha mma maka onwe gị. Ọ bụrụ na mmadụ nwere njirimara niile edepụtara ya, mgbe ahụ ọ nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ dị mma maka ojiji ya n'ụzọ dị mkpirikpi. Ahịa ahụ jupụtara n’ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche ga-agbagha onye ahịa ya. Ọ bụ ezie na onye ahịa nwere ihe niile ọ chọrọ n'uche ya, mana ọ ga-enwe mgbagwoju anya mgbe ọ gafesịrị ọtụtụ ngwaahịa. Nke a ga - eduga ya ịzụta ngwaahịa na - adịghị mma na ezighi ezi maka onwe ya. Ngwaahịa ahụ kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ mana ọ gaghị adabara onye ọrụ. Ya mere, odi nkpa itinye akwukwo gi choro. Nke a ga - eduga gị ịzụta ngwaọrụ dị mma n'ịrụ ọrụ yana ọ dabara adaba maka ọrụ gị.
Fnyocha Onlinentanetị maka ngwaahịa achọrọ:
Ọ bụkwa ihe dị ezigbo mkpa ime tupu ịzụta ihe kachasị mma n'ahịa. Igwefoto ndị yi n'ahụ na -eche ihe na-ewu ewu n'afọ ole na ole gara aga. Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ arụnyere igwefoto ndị nwere ihe mkpuchi maka ndị nche ha. Emere nke a n'ihi mmụba nke igwefoto ndị a. Ọtụtụ ụlọ ọrụ amalitela iji aka ha mee kamera nwere aka ha iji ree ha n'ahịa. Nke a emeela ka ọtụtụ igwe mmadụ nwee ụdị uwe n’ahịa. Ya mere, tupu ị gaa ahịa ma zụta igwefoto ahụ nwere igwe kachasị mma, mmadụ ga-achọrịrị ya na ịntanetị. Ọ ghaghi ịgụ nyocha nke ndị ọrụ ndị ọzọ ga-eme ka obi abụọ ya banyere ngwaahịa ahụ doo anya.
Oge ezigbo batrị:
Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa iburu n’uche tupu ịzụrụ igwefoto ndị ahụ yire ahụ. Oge a na-eji batrị bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa maka igwefoto eji ahụ. Ọ ga-akwadorịrị ezigbo oge batrị maka ihe ndekọ edere ogologo. Dị ka anyị si mara, imirikiti iji igwefoto ahụ na-eyi apụ apụ na-abụghị ụlọ anyị. Maka ụbọchị zuru oke, igwefoto ga-enwerịrị oge dị mma batrị nke na-eme ka igwefoto na-arụ ọrụ oge niile na-ahapụghị ya ka ọ nwụọ. Ọ ga-enwerịrị ihe ndochi batrị mberede ka enwere ike dochie ya na batrị nwụrụ anwụ iji mee ka igwefoto na-agba ruo oge ụfọdụ. Anyị nwere ihe atụ nke ngalaba ndị uwe ojii. N'ọnọdụ ha, ha chọrọ igwefoto ịdabere na ya maka iji ụbọchị dum. Igwefoto ga-anọrịrị na arụrụ ọrụ nyocha ọ bụla ma ọ bụ ndekọ ọ bụla. Nke a chọrọ igwefoto eyi ya nke nwere ezigbo batrị. Yabụ, na njedebe, ọ bụrụ na ịchọrọ ka e mezuo ebumnuche gị n'ụzọ zuru oke, ị ga-ede ezigbo usoro batrị na listi gị.
Oke ọnụ ọnụ
Ọnụ ahịa ekerewokwa oke ọrụ na ịzụta ngwaahịa dị iche iche na-etolite ahịa. Ndi mmadu emechaala ukpuru. Ha kwenyere na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe ngwaahịa kachasị mma, mgbe ahụ ị ga-akwụrịrị ọnụahịa mara mma maka ngwaahịa ahụ. Ma echiche a ezighi ezi. Ọ bụrụ na ị chọọ ahịa nke ọma maka ihe kacha mma, ha ị ga - enwe ike ịchọta ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa dị ọnụ ala. Ọ bụrụ na anyị na-achọ ahịa ahụ, mgbe ahụ anyị nwere ike ịchọta igwefoto ndị na-arụ ọrụ kachasị mma maka ọnụahịa dị ọnụ ala nke $ 100- $ 150. Igwefoto ahụ nwere eyi kacha mma ga-adịrịrị nkwụ ụgwọ n'akụkụ akụkụ ọnụahịa. Ọ gaghị abụ ibu arọ n’akpa gị.
Ezigbo Ndekọ Ogo
Igwefoto kwuru maka ịdekọ na ịse foto. Nke a bụ otu ihe banyere igwefoto eyi. Dekọ ụda bụ otu ihe dị mkpa nke igwefoto eji ahụ. Igwefoto ndị a ga-edekọ ihe niile na - eme n'ihu onye ọrụ. Nke a na-agwa anyị ogo igwefoto. Ọ na-abụkarị ọdịda nke nnukwu ihe ịma aka na-edekọ mgbe ọ na-aga n'ihu. Nke a bụ ihe ịma aka maka igwefoto. Ndị ọrụ nọ ọnọdụ nke mmegharị na-aga n'ihu n'oge nke, idekọ bụ ihe siri ike. Vidiyo ahụ edekọ ga-emecha nke ọma na nke a. Yabụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhọrọ igwefoto kachasị mma, mgbe ahụ anyị ga-elele ogo ndekọ ya ka anyị na-ebugharị ya.
Ogo na Ibu igwefoto:
Ọ bụrụ na ị na-achọ igwefoto ahụ nwere uwe kachasị mma n'ahịa ahụ, ị ​​ga-atụlerịrị ndị nwere obere nha ma dị fechaa. Ibu oke igwefoto dị oke mkpa dịka ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ etinye ya na isi ya, ọ gaghị ekwe ka ọ na-emegharị isi ya na ọ ga - abụ nsogbu. Iko ya bukwara ihe di ka igwefoto gha agha pere mpe. Ọ bụrụ na igwefoto buru ibu nha ahụ ọ ga-adị njọ ma bụrụ onye a ga-ebu ụzọ mara nke bụ ihe ọjọọ. Ya mere, ekwesịrị ibu nha na ịdị arọ nke igwefoto mgbe ị na-azụ igwefoto ahụ nwere ahụ ọhụụ.
Oghere Nchekwa nke Igwefoto:
Nchekwa bu kwa ihe di nkpa nke igwefoto ndi ekwesiri ilebara anya. Karim ma enwere igwefoto eyi, nke a na-eme ka ịdekọ vidiyo na-aga n'ihu. Ọ ga-akpọnwụ akpọnwụ ma ada ma ọ bụrụ na nchekwa nchekwa ahụ jupụtara na obere oge. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ igwefoto kachasị mma, mmadụ ga-eburu nke a n'uche.
Njirimara ndị ọzọ igwefoto-Worn Kachasị mma kwesịrị inwe:
Enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ a ga-ebu n’uche mgbe ị na-ahọrọ igwefoto nwere ahụ gị nke kacha mma. Ọ ga - enwerịrị obosara iji kpuchie nnukwu oghere na mpaghara. Ọ ga-agụnyekwa ihe eji eme ka ihe na - eme ka ọ na - edekọ n'abalị. Ọ ga-enwerịrị ụda olu. Ọzọkwa, ọ ga-adịgide.
Nzuzo 5567 2 Echiche Taa